I-Moderniste Architect Villa - eBrussels - I-Airbnb
I-Moderniste Architect Villa - eBrussels
Vorst, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, i-Belgium
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Carsten
U-Carsten unokuphawula okungu-34 kwezinye izindawo.
I-Architect Villa - Isikhathi se-Brussels World Exhibition
Isimo esiyingqayizivele phakathi kwamapaki amabili amahle kanye nebanga nje letshe kude nezindawo zasemadolobheni zaseBrussels.
Ivuselelwe ngo-2019, le villa igcine intelezi yemvelaphi yegolide yaseBrussels yasekupheleni kwawo-1950/ekuqaleni kwawo-1960 (i-Brussels World Exhibition) futhi ngenxa yalokho isisetshenziselwa amasethi wamamuvi.
Sisanda kuqala ukuqasha le ndlu kodwa sinenye indawo e-Brussels lapho izivakashi zethu zihlala zijabule kakhulu!
I-100m ukusuka e-parc Duden (Forest), e-villa yangasese ene-facade emine engu-± 260 m², yalungiswa ngo-2019 nengadi yayo ebheke eningizimu-ntshonalanga, eyakhiwe umakhi uRobert Schuiten.
Indlu yindawo esihlala kuyo futhi sinikela ngayo uma sikumaholidi. Ngakho-ke ungalindela ukuxuba kwekhwalithi yesimanje kanye nefenisha yokuklama kanye nemishini.
Esitezi esiphansi, sinehholo lokungena elinendlu yangasese yezivakashi kanye negumbi lokugezela, ikhishi elihlome ngokuphelele kanye negumbi lokuhlala/ lokudlela elikhanyayo elimise okuka-L (+/- 70m²) elinendawo yomlilo enikeza ukufinyelela kuthala. Phezulu, i-master suite enegumbi lokugqoka, igumbi lokugezela, amanye amagumbi okulala amathathu amakhulu anegumbi lokugqoka kanye namagumbi okugezela / angasese ahlukene.
Ingadi enhle enelanga enethala, Igalaji lezimoto ezimbili, amabhayisikili nendawo yokupaka yangaphandle, ama-cellars, igumbi lokuwasha, i-alamu, uhlelo olusha lokushisa olufakwe ngo-2019.
ubusuku obungu-7 e- Vorst
Indawo eyingxube eyingqayizivele yendawo ethule neluhlaza (ikhaya lamanxusa) enezindawo zokucima ukoma, izindawo zokudlela nezitolo endaweni eseduze (ngaphansi kwekhilomitha elingu-1).
Le ndlu yindawo esihlala kuyo futhi sinikela ngayo uma sikumaholidi. Uma kwenzeka singekho, sizoba nomuntu ongaxhumana naye otholakalayo ukuze uthole usizo. Yebo, sihlala sitholakala ukuze sisize ngocingo nangokuthumela imiyalezo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Vorst namaphethelo